Umboniso omkhulu malunga noT Thierry Baudet ozayo: uMartin Vrijland
Sibone imiboniso emininzi kwangoko. Bekukho umboniso eLondon nxamnye United Kingdom kunye Gibraltar European Union ubulungu zimvo, yaye siye sabona umboniso leftist leyo kuthiwa "Ukuba ufuna ukudubula Thierry ufile bathi, bang!" Ukuba kwiveki elandelayo kwakhona ukubona umboniso enjalo TV, kubalulekile ukuzibuza ukuba unokukwazi njani ukuthembela imifanekiso kwiTV. Abantu abaninzi banokuba yinto ehlekisayo malunga nayo, kodwa kunengqiqo ukuba yinto ebaluleke ngakumbi kwimifanekiso oyibonayo kwiTV. Sivame ukukholelwa yonke into esinikwe yona ngamajelo, kodwa sikhohlwe ukuba amanxibelelwano amakhulu eendaba ezandleni zabantu abanayo yonke imali kunye nezixhobo zokubamba izinto ezincinci. U-John de Mol, umzekelo, ungumnikazi we-ADP ye-ANP.
Khawubone ukuba bangaphi abantu abavakalisa lo mboniso omkhulu:
Enyanisweni abaninzi baya kuthetha ukuba awuyi kubeka into enjalo kwisigaba, kuba kukho amaxesha onke amangqina anokuqinisekisa ukuba ukubonakaliswa kwenzekile. Ngokomzekelo, ungatsho ukuba ngokuqinisekileyo kwakufuneka ibe ngamakhulu amabini abantu abaya kwindlela ebonayo ngeLondon, kuba i-BBC ayiyi kukukhohlisa into enjalo? Yaye ikhangeleka kakhulu. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Ngoku andiyi kuthetha ukuba akunakwenzeka ukuba abaseBrithani bayondla nge Brexit kwaye ngoko bathabathe ezitratweni. Inkqubo yonke ye-Brexit yayisuka kwimbono yam, ifunwa ukususela ekuqaleni ukuba ikwazi ukubhala iqela elibalulekileyo emphakathini njengeqela elibangele inhlekelele. I-United Kingdom kunye Gibraltar European Union ubulungu lwezimvo zange yenzelwe ukuba uphumelele yaye Thérèse Meyi kufuneka baqaphele oku ukungaphumeleli kunye nabantu Yayindihlupha ukuqinisekisa eYurophu uya kubona ukuba ubuzwe nokugxekwa ye-EU (ezifana kwemisinga ekunene-iphiko kume eYurophu, Thierry Baudet kuquka) kanye kwakhona kufuneka ukuba iphelile.
Into ebalulekileyo kum kukuba ukuba uqaphele ukuba isihlwele akudingeki ukuba sibe sikhulu njengoko kubonakala ngathi kwaye iindaba eziphathekayo zinakho zonke iindlela kunye nezindlela zokunyusa iimeko kwimeko ethile ngokuthanda i-ajenda. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Ukuba izinto eziseburhulumenteni mhlawumbi zinyanzeliswa okanye zibekwe ngokucacileyo okanye zibeke ngokupheleleyo kwisiganeko, ngokwemvelo kufuneka abantu abazenzayo bakwazi ukuthatha inxaxheba kule nto. Kule minyaka, oorhulumente baye banethuba elaneleyo lokwakha inethiwekhi enkulu yeNoffizieller Mitarbeiter. Leli gama libolekwe kwixesha le-East German DDR. Enyanisweni, aba bantu bahamba nje emphakathini, kodwa ngubani ozenzayo ukuba afumaneke kwilizwe ukuze atshintshe inzuzo. Kungenjalo ke ukuba bayamenywa ukuba bathathe inxaxheba kumboniso, umzekelo wokuphuma kwimbopheleleko yokufaka isicelo okanye ukuzonwabisa ngakumbi 'uxolo lwezezimali' ngezinye iintlawulo ezingabonakaliyo kunabanye abemi. Ummelwane wakho okanye ummelwane unokukwazi nje ukuba yi-Inoffizieller Mitarbeiter, ngaphandle kokubona okanye ukuvuma. Ngokuqhelekileyo nabo bantu baya kumajelo asekuhlaleni baze baphendule kuyo yonke indawo ukuba banamathengisa amanqaku afana nalawa kwaye baphinde baphinde baphikise ukugxeka ngenxa ye-ajenda yelizwe. Le nto ingaba yimiba ephambili ye- kwinqanaba elisekhohlo ukuya kwesokudla, esiyibonayo ukutshisa namhlanje.
Kwaye, ukuba, umzekelo, wabukela uhambo oluthile okanye ubonakaliso kwaye ukhumbule abanye abantu, kodwa kungabikho abaninzi, ngoko unokucinga ukuba awukho nje ngexesha elifanelekileyo okanye ukuba kukho abantu abaninzi kuza. Mhlawumbi wawukho kwindawo engafanelekanga. Okanye mhlawumbi kwakuxakekile. Kukho nawuphi na, imiboniso efana neyo ngaphantsi ibonakala ukuba isebenzise i-ajenda ekhohlo kunye nelungileyo, kwaye ibhalo libonakala libonakala apha nanje. I-ajenda apho ilungelo ngaphandle kokuqiniswa okufanelekileyo njengokuba kungathandeki okanye 'ayinayo imbono yeqela elikhulu"kuboniswa. Ndiye ndithi iminyaka kangangokuba i-field force yekhohlo ukuya kwesokudla isetyenziselwa ukudibanisa ekugqibeleni ilungelo lokungaphumeleli. Injongo yale nto iya kufumaneka kwinto yokuba ilungelo linxulumene 'nokugxeka umyalelo' kwaye (oko kubizwa) 'iingcamango zobuqhetseba'. Ukuba unako ukukhonza elo qela labantu ngokusebenzisa uxinzelelo lweqela kunye nekhonkco ukuya kunene kunye nezoqoqosho, uzimisele ngokujongana nokugxekwa komyalelo osisiseko. Umyalelo osisiseko ofuna ukuzalisekisa umnqweno we-superstate kwaye ufuna ukuphumeza ukuchaneka 'kwiingcamango zobuqhetseba' okanye 'nayiphi na indlela yokugxekwa'. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Nge-software elula-engadini kunye nekhitshi esuka kwi-Adobe, unokwenza umboniso omkhulu kunokuba usesikhaya emva kwekhompyutha yakho okanye iPC. Umfundi unokufumana konke okunyanisekileyo, kodwa ndiyichaza ngamathuba kwaye ndibone ngamehlo ami indlela ukubonakaliswa kulawulwa ngokupheleleyo. Ndabona The Hague indlela amapolisa Antifa abaqhankqalazi kubanjelwa (ivaliwe ngaloo mini ezizodwa) Burger King indawo, ukukhulula abo kwi abaqhankqalazi Pegida ukumbamba ngoko nangoko phambi lwecamera. Ukubanjwa kwe-Pegida frontman kwenzelwe ngokupheleleyo. Babengazi nje ukuba ndihambahamba ngekhamera kwaye iyakwazi ukubamba. Kwaye abaninzi abanakholwa, kuba asifuni ukuba sinyengiswe ngamajelo. Ndithatha isikhundla sokuba abantu bayashukunyiswa kwaye badlalwe kwaye ingxoxo kwiimidiya zentlalo iphinde iqondiswe ngombutho we-troll ukuya ku-Inoffizieller Mitarbeiter olungele ukungena kuyo yonke ingxoxo. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Abezindaba bayazi ukuba abantu bafuna ukubona ubungqina kwaye ke basibonisa imifanekiso. Ukufunda eli nqaku kwakhona apho ndibonisa ngemifanekiso, umzekelo, i-vloggersrel yonke e-Zaandam (2016) isetyenziswe ngokupheleleyo kwindawo. Kunokwenzeka kwaye kwenzeka. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba sithembeke kakhulu kwaye sinokholo oluninzi kuorhulumente nakumajelo, siyaqhubeka sikholelwa oko sikubonayo. "UUkuba kukho kwesikrini kuya kuba yinyaniso"Ngaba isiphetho esingenalwazi. Ngelishwa, oko akusekho okulula. Ukuba kusekhompyutheni, mhlawumbi kunokunyanyiswa okanye kudalwe. Kubalulekile ukuba, ngenxa yokuba ngenye ubungathanda oku kuqonda ukunikezela kwingcinezelo yoontanga kuba wafikelwa imifanekiso ukuba uninzi imele imbono ethile njengoko isilwanyana iqela "na wena ukujoyina elo qela. Ngelishwa, umfanekiso okholisa ukuba iindaba eziphathekayo azikwazi ukuzithembeka ngu-100%. Gcina loo nkcazelo.
Sifike kwixesha apho imidiya, ngokudibanisa nomkhosi we-troll, isetyenziselwa kumajelo asekuhlaleni ukuba idlale ngakwesobunxele ukuya kwinqanaba elisemgangathweni, ukukhuthaza abantu ukuba bavote amaqela aphiko olufanelekileyo njengoTyerry Baudet okanye, ngokuchaseneyo, ngakwesobunxele. Kumele kuqalise ukuvakalelwa, kuba abantu bayondliwa ngento ethile. Oko abo bavoti baqhubeka belibala kukuba akunandaba nokuba uvota. Zingaphi ukhetho esinokuzisebenzisa ukuze sivale amehlo ethu ngezithembiso ezingazange zithunyelwe? I-Brexit mhlawumbi ngumzekelo obalaseleyo. Ndacacisa ukususela ekuqaleni ukuba i-Brexit yayingaze ifune ukuphumelela (jonga apha en apha). Into efunekayo ukuyifumana kukuba abadlali abavunyelwe ukumela le ntlangano yezopolitiko bangabonisa ukuba ukushiya i-EU kuya kuba yintlekele yemali. Lo mdlalo usasazeka kwiminyaka kwaye ngaphezu kwezinto ezininzi zokunxibelelana kweendaba zezopolitiko, kodwa oko kungundoqo. Ukuba umphumo wokhetho uphendukela ekubeni yinzuzo ukusuka ekunene, oku kungenxa yokuba le yinzuzo efunwayo 'nge-mission'. Imidiya kunye neendaba zoluntu ngokudibanisa nazo zonke iinkcukacha ezinkulu zinika abo basemandleni isixhobo esikhulu sokuhamba kwindawo abayifunayo. Umphumo kuphela oyifunayo unamandla amakhulu eYurophu, nangona kubonakala ngathi ilahlekelwa ngethuba lexeshana. Ngaba u-referenda esasinawo eNetherlands wavelisa nantoni na? Hayi, akunjalo.
UHegel wachaza indlela i-thesis kunye ne-anti-thsis isenza ngayo rhoqo. Oku kuchazwa ngokulula njengendlela yokudibanisa kunye nokunciphisa ibhetri. Kwenzeka ntoni xa udala ezimbini izinto? Emva koko ubeke isiseko sokuvelisa ngoku ngqo. Kwaye ke uvumele ukukhanya kufike. Ukuchasene kuluntu kuyadalwa ngokugqithiseleyo kwaye kuveliswe kumbane ophezulu ukwenzela ukuba ekugqibeleni uqaphele okwangoku kwindlela efunwayo. Lo ngumthetho omdala kakhulu ukuba amandla okwenene emva kweetekisi asetyenziswa. Yiyo kanye indlela ukubonakala kwentando yeninzi kugcwalisa ngayo abadlali abaqeqeshiwe kakuhle kwintsimi yezopolitiko. Zikunika iifrikansi zezichasene, ezikule ndlela zibonelela ngoku ngqo kwiziko elifunayo.
Ewe, sonke sifuna ukukholelwa kwintando yesininzi. Leyo kuphela inkqubo esebenzayo. Loo point of ndiyaqonda ngokupheleleyo, kodwa ukuba siza kubona ukuba idemokhrasi eYurophu uye wakha nto ngaphezu kokuba idemokhrasi .Imisebenzi, esekelwe kwimigaqo Hegelian, simele siqale ukutshabalalisa ukhula ukuze iingcambu zayo nge acocekileyo view qalisa.
Ngaba akusiyo ixesha lokuhamba kwaye sizibonele sinyanzelisiwe ukuqinisa i-Hegelian field field kwi-polarity yayo entsha? Unceda ngokwenene ukuzalisa iiplani kunye kunye nokunciphisa iiflethi ezintsha. Ukuba sifuna ukuhambela kwinkqubo efanelekileyo, simele siyeke ukuhamba ukuya kwiipota kwaye ke sinikezele ngokusemthethweni kwinkqubo ekhoyo. Iintente zengqungquthela ezizalisa ukubonakala kwekhohlo kunye nokunene azikho ngaphezu kwemaski ebusweni bentando yesininzi efanayo, eqhuba kuphela kwaye iphendule imibono eyahlukileyo kuluntu. Indlela yodwa yokutshintsha into kukuba ungasayi kunikezela ngokusemthethweni kwinkqubo engasebenzi. Awekho amavoti kwaye ayisayi kusebenza emva kweenkontila zomnatha. Ukuba ngaba yintando yesininzi, ungatshintsha into ethile. Ngethuba nje ubeka ivoti yakho kwi-pawns echasayo, uyazikhohlisa nje. Ugcina inkqubo ngokulindela ukusuka phezulu. Ukugijima emva kwemigangatho yezopolitiko yamandla kufana nokunikezela ngokusemthethweni kwintsimi yamandla eyenza ngokugqithiseleyo idlala i-Hegelian dialectics ye-plus and minus poles. Ungalokothi uhambe uye kwiipolon kwakhona kwaye ungasayi kugcina inkqubo okanye uyilindele ukusuka phezulu yinto yokuqala efanelekileyo. Iprogram ebolile inokuqalisa kwakhona xa idilizwe ngokupheleleyo kwaye igxothwe. Oku akusayi kwenzeka ukuba ugijime emva kwesicwangciso-qhinga esitsha senkonzo yokuphepha (khangela umzekelo le ngcaciso malunga noT Thierry Baudet njengeClingendael pawn).
Ukuba kukho isibonakaliso esikhulu kwakhona kwiindaba okanye ukuba kukho umboniso ochasene neBaudet okanye ngakwesokhohlo kucetywayo, ungathathi inxaxheba kulolu hlobo. Musa ukudibanisa ne Inoffizieller Mitarbeiter. Ungasebenzisa ke inkqubo yokwenza umsebenzi. Kunoko ukhethe uguquko lwangempela.
Funda Nantsi indlela yokwenza enye kunye neenguqulelo kuphela ngaqala namhlanje. (Ukufunda ngokwenene!)
tags: antifa, Baudet, dan, bonisa, eziziimbalasane, Forum, FvD, amakhonkco, paf, Pegida, kunene, Thierry, iziphumo zonyulo, kuthetha
25 Matshi 2019 kwi-14: 50
Uhlawula ezininzi iintela kunye nama-premium, uvota njengento efanelekileyo yekhoboka elithembekileyo ... kulindeleke ukuba ucinge ngokucokisekileyo 🙂 Yintoni ubomi obunzima kakhulu ...
25 Matshi 2019 kwi-15: 21
Uzeleyo ngehlombe novuyo unika yonke 22 iminyaka uqeqesho kulwimi ezibonwayo, igrama ezibonwayo, découpage kunye indibano neentatheli, abahleli idesika, ezazivela kwamanye amazwe, isiphelo kunye abahleli, copywriters, abaqeqeshi umfanekiso, iingcali zonxibelelwano ezivela zabaphathiswa, cameramen, abahleli, abaqeqeshi umfanekiso camjo kaThixo, inkqubo , abenzi bamabonakude kunye nabalawuli bamashishini karhulumente, ommandla kunye nentengiso. Uqeqesha abafundi abavela kwiiklasi zeFilimu, ii-Academy ze-Art, iiKholeji, iiYunivesithi, iMedia Academy, njl.
25 Matshi 2019 kwi-15: 35
Ewe, amajelo eendaba abonisa i-arsenal yabo kwaye ngaloo ndlela enza ukuba kubonakale ngathi "ngokwemvelo abayi kuze bayisebenzise". Smart!
25 Matshi 2019 kwi-15: 38
Akayikholelwa iifoto, kodwa usakholwa ngamaphephandaba ...
25 Matshi 2019 kwi-15: 54
.. ngokwemvelo ayisebenzisi loo 😀 uyaphambuka?
25 Matshi 2019 kwi-15: 55
25 Matshi 2019 kwi-15: 07
Ndatshitshise kwi-MH17 'ntlekele'. Ukuba kwakukho abantu abaye balahlekelwa ngumthandayo kwaye baphendule ngokukrakra ukuba uthethe okuthile malunga nokukhohlisa.
25 Matshi 2019 kwi-15: 23
Ukulala njengokuba iprintwe ...
25 Matshi 2019 kwi-15: 36
Ewe, ingcali ye-GDR yenza sengathi ibonisa ukuba yonke into isebenza njani, njengamabonakude abonisa ukuba ungenza njani iindaba ezimbi ... ukuze ziphakanyiswe kwiingcali ezizilumko "ezingadlala indima ephindwe kabini"
25 Matshi 2019 kwi-17: 55
.. apha sinokubhekisela kwiYunivesithi yaseUtrecht kwakhona, yinto enye enkulu. Leiden Utrecht njl
Enye ingxelo ebhekiswe kwi-FVD inkokheli yaxutyushwa kwakhona kwiNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente kwiveki ephelileyo. Umqeshwa weYunivesithi yaseUtrecht uye wabeka "iVolkert ukuphi" phantsi komyalezo we-Facebook ovela kwi-FVD, ngaloo ndlela ubhekisela kumbulali wePim Fortuyn.
25 Matshi 2019 kwi-18: 46
Oku kuthethwa ukuba kuvuswe uvelwano oluthe xaxa kuloo Baudet kwaye kumnike ukuthembeka ngakumbi njengomoya "ozimeleyo" ongeyena ... kwaye ungashiyi nantoni nakwiMdurodam ulawulo lokunyelisa i-Neanderland.
25 Matshi 2019 kwi-20: 03
25 Matshi 2019 kwi-20: 28
Zekers, yamkela eMadurodam. Ukuphazamisa loo nto kodwa phantse wonke umntu unalo ibhotela entloko. Ukubala ummi, ukubala urhulumente. Imithetho iyasebenza kuphela xa izaliseka.
Simele silahle le ntando yeninzi, njengephablikhi. Imisebenzi esekelwe kumandla kunye nokungabaniki okanye ukukhetha, ukukhetha, njl. Imisebenzi yonke esemthethweni kufuneka ibe yesikhashana. Kwaye oko kusebenza nakwiinkonzo zoluntu. Ukutshintshiswa kukuphela kwedemokhrasi kwaye kuqinisekisa ukubonakaliswa kwaye kugweba amaqhosha avela kumandla okulawula.
Kodwa ke, abantu abaqhelekileyo abakalindelanga loo nto. Andicingi ukuba ndifumana amavoti amaninzi kumakhoboka.
26 Matshi 2019 kwi-17: 35
Ewe, iNetherlands iluhlu lweehhafu zeerhafu. Yibize ilizwe elihlawula imali. Kutheni le nto ithatha ixesha elide kangaka? Ndilindele ukuba abasolisi abaqhelekileyo benze konke okusemandleni abo ukususa iMadurodam kuloluhlu.
Kuye, kwaye bekuza kuba lizwe elikhohlakeleyo ngasese.
26 Matshi 2019 kwi-21: 16
Kanye njengoko bafuna kakhulu kwi-2012 ngekhomishana yaseHelsinki eWashington DC xa uMadurodam esongela ukulahlekelwa nguMgangatho we-Tier 1 ngenxa yokuthengiswa komntu okuqhubekayo (ikakhulukazi ngaphantsi kweminyaka) kwaye iMadurodam isesikhundleni esiphakeme ... kodwa igadi zigcinwa kakuhle.
27 Matshi 2019 kwi-13: 44
Iveko yengqondo ikhona kwiinkulungwane kunye neenkulungwane, i-millenia. bafihla emva kwamagama angamanga, njl. Bahlala bexhamla njengamakhoboka abahlala befuna ukuba ngabakhonzi babo. Akukho nto ishintshile.
30 Matshi 2019 kwi-19: 10
Ewe kunzima kakhulu, kodwa ingqungquthela kunye neentambo zomelele kwakhona ...
uJohan the hague wabhala wathi:
26 Matshi 2019 kwi-13: 26
Ngokwenene imbonakalo yamandla weendaba. ENG !!!
Ndisafuna ukubona ukuphambana okubukhali.
Ndandicinga ukuba kutheni amapolisa ayenza ngokukhawuleza kwaye ayivumele ukuba iphele ngendlela.
Umhlaseli wayeyaziwa kwaye uyafumaneka kwaye yonke into yayilungiselelwe kwangaphambili.
Into enokuzibuza ukuba ukuba abantu besele bazinike ithemba labo kwezopolitiko kunye nokuphathwa / amapolisa, kutheni ungababuza apha.
Okanye ngaba abo babuzayo, bayesaba ukuza kule nto kwaye enye yindlela yokuvota i-1 rhoqo rhoqo?
Kodwa ngoku umehluko.
Kwiveki eveleleyo ndandihamba ngebhayisikili ngeSuvenvenen kwaye ndavalelwa kwindlela yokuhamba ngebhayisikili yi-van eFransi eyayingenaso injongo yokundibeka phambili.
Ndikhululekile ngebhayisikile kodwa qaphela ukuba ndiza kuvela emva. Kwakuyivenkile yaseFransi eyayifikile ngokukhawuleza kwaye yandixabisa ngesilibuko, iphula isiliva esibuko.
Umqhubi wagxuma waza wabuyela ngokukhawuleza ngokubomvu.
Konke oku kwenzeke kwisikhululo samapolisa eSuveningen.
Ngaba ndicinga ukuba ndiza kuxela oku ngengozi yokuphazamiseka?
Naluphi na uvavanyo.
Ndihamba eofisini kunye nomfazi omdala osikrokrazayo uyeza kum ngathi, "awuqondi ukuba akunangqondo ukungena apha"
Akunakuchukunyiswa ngokupheleleyo, ndixelela ibali lam kwaye ndibuze ukuba bayakwazi ukulandelela umFrentshi ngeemifanekiso zekhamera.
Uthi asikwazi, asikwazi.
Ndiya kugxininisa ndithi, oku kuphelile ngokuhlukile, igosa lithi: unayo ntoni? Ndiyicinga ukuba kunjalo kwaye wathi: Hayi ke!
Ndithi, ndididekile, ngokuyeka, ubiza umnxeba wakhe, indoda esele ikhulile.
Uphinda oko uMnu athi, kodwa ucinga ukuba kubi kum.
Ngelishwa, kucinga ukuxhalabisa.
Kwaye, oku kwakubu bungqina obunamanzi bokuthi i-Utrecht yenziwa ngokucetyiswa.
Yintoni esinokuyenza nale nto?
Kwakhona akusayi kuba yinto ezayo kumandla. Oku kuya kuhlala kuyindlela yokulawula
26 Matshi 2019 kwi-17: 37
Kunomdla kodwa kunzima ukulahla iqela elithile. Abayeki ngokuzithandela kwaye bahlala kuyo yonke indawo yoluntu ekuthiwa ngokwahlukileyo, kodwa basebenze ndawonye ngendlela ehlazo.
26 Matshi 2019 kwi-22: 31
Mhlawumbi ndilula, kodwa kutheni kungekho mntu wakha wathatha inxaxheba kuRutte?
Wonke umntu ngoku uhleka ngamaxesha e-3.
Into endiyifumanayo ekhethekileyo kwi-intanethi yiRussia !!!! kutheni umntu kufuneka ahambe yonke indlela eya eRashiya ukuze isidenge sinokubuza imibuzo malunga nendlela eyaziwayo. nto ayikho nantoni na.
27 Matshi 2019 kwi-11: 30
Ngokombono wam akunakuchukumisa ukuthatha inyathelo "ngokumelene" neRutte okanye "ngokumelene" nentando yeninzi ... okanye "ngokumelene" namapolisa okanye "ngokuchasene" nomthetho wolawulo ... okanye "ngokumelene" nayiphi na issystem eyenza inxalenye yiyo yonke inkqubo egcina uluntu ebukhoboka.
Abantu abavela kubantu bahlula phakathi kwabo kwaye iqela eliphethe amandla lenza konke ukugcina abantu abahlukeneyo babantu. Ukhetho ngumzekelo ocacileyo ukuba abantu bahlula phakathi kwabo ngokwazi kwabo. I-intando yesininzi ayinanto yokwenza ngokubambisana, kodwa ngokuhlukana, ukwahlula nokulawula ezopolitiko. Unyulo lwangoku lubonise ukuba kulula kangakanani ukuphatha abantu abantu ukuba bavotele iqela elithile kwaye ngaloo ndlela bakhuthaze ukwahlukana.
Abantu bahlala "kwisiqithi" sabo, bethatha ipropaganda kunye nokufundiswa njengendlela yekhekhe elimnandi kwi-loft yabo, ekuthiwa yikhaya. Emva koko, kwindlu nganye kukho isikrini esiqhaqhazelayo, kunye kunye nemfundo enyanzelekileyo kunye nokufundiswa okuqhelekileyo kunye neentengiso, zenza into yokuba abantu abahlala kwisiqithi sabo kwaye benze konke abakwaziyo ukugcina isiqithi sabo. Ngamanye amaxesha abantu banikela i-euro ezimbalwa kwiqela lesithathu, kuba babona ukuba kwiziqithi ezithile izinto zihamba kakubi okanye zitshatyalaliswa. Izizathu zeengxaki azipheliswa yizo ezibizwa ngokuba yizibonelelo, kodwa zigcinwe.
Ukuthatha isenzo "ngokuchasene" kuthetha ukuba umyalelo osisiseko kunye neenkqubo eziye zazenza kuphela zifumana amandla amaninzi kumxholo wokulondoloza uwonke-wonke ... okungazange kwenzeke ukuba kukho "intlalo yenkululeko" yangoku. Ukuthatha isenzo "ngokuchasene" kuthetha ukuba abantu basaphila kwisiqithi sabo kwaye baxhomekeke kwiinkqubo ezidalwe ngamandla amakhulu.
IVenezuela ngumzekelo obuhlungu kwaye ohle kakhulu. Abantu balambile apho, ngelixa lizwe elinemveliso enesimo esihle sezulu ekukhuleni ukutya ngoncedo lwe-permaculture. Esikhundleni sokuqeqesha uhulumeni ukuba afundise abantu indlela yokukhulisa ukutya kwabo, amagosa athile anikwe izixhobo ezingaphezulu kunye nezikhulu ukugcina abantu abanomsindo nabalambileyo. Apha eFransi naseNetherlands akufani; nathi sinokujika!
Yintoni esimele siyenze ngoko?
Iiwebhusayithi zeMartin kunye nam, zizama ukubonisa oko kwenzekayo ... kutheni kubangelwa ngumonakalo ikakhulukazi kumazwe asentshona. Abantu basoloko bezama ukufumana izisombululo kwiingxaki, apho izicombululo azikho nto ngaphandle kohlobo olukhoyo lweenkqubo ezikhoyo, eziye zanyanzeliswa ngokugqithiseleyo emqaleni wabantu ngokufundiswa ukusukela emncinci.
Kukho isisombululo esisodwa kuphela: ukubeka iinkqubo ezikhoyo, ukwenzela ukuba abazingeli bamandla nabo baxoshwe. Ukuze kufike kuloo nto, ukuhlanganisana kwangempela kwendawo kufuneka kuvele kuqala phakathi kwabantu. Kuphela (iqela) iqela elikhulu labantu linokumisa loo nto kuthiwa "ngabagcini besikhokelo" somthetho kunye nezinye izicucu. Uvukelo olulodwa lubulawe ngonya ngabantu "benza nje umsebenzi wabo" okanye benze ukuba ubomi bungabonakali, ngelixa isihlwele sinobuqhophololo kwisigodlo sawo sibonakala kwisikrini esikhanyayo.
Ubuncwane bebusuku, ibhola lebhola yebhola kunye neentambo kwakhona ... kunye neentlanzi ezintle, ngenxa yokuba asikwazi ukunceda kwaye kufuneka sibe nesimo esihle!
27 Matshi 2019 kwi-18: 40
Uluhlu oluhle. Njengoko ndixhalabileyo, inkqubo ekhoyo ichithwa phantsi kwiingcambu ngeenkqubo ezahlukeneyo zolawulo apho abantu abasesikweni abasesikweni banokusebenza kuphela kwimigodi. Ingxaki, imeko, kukuba iikhoboka zigcina inkqubo ekhoyo kwaye ziya kukhusela nazo zonke izandla zazo. Abakwazi ukuba neengozi yokuba ukuguqulwa kwenkqubo kuya kuphazamisa ibhola okanye ii-chips.
27 Matshi 2019 kwi-11: 44
UVan Kooten noDe Bie: I-Counterparty:
« Iforamu yeTyard Baudet yeDemokhrasi (FvD) "Isiqwenga seMinerva sisasaza amaphiko alo"
UTyerry Baudet uya kuvuselela iNetherlands kwakhona! Ewe! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 101.197